Gị Onye Mmekọ Na-aga nke Ọma
Nwere ike iji nka nke Presto akpaaka dịkwuo gị n'ichepụta ihe ịga nke ọma. Site na ọzụzụ nke akụrụngwa mbụ, site na ọzụzụ arụmọrụ na-aga n'ihu, na ịmịpụta ndụmọdụ na nrụpụta, Presto Automation nwere ihe ọmụma teknụzụ yana arụmọrụ dị mkpa iji hụ na usoro nrụpụta gị na-aga nke ọma yana nke ọma dịka o kwere mee
IZUZU OKWU OKWU NA PRESTO AUTOMATION Teknụzụ
Maka ndị ahịa ọhụrụ na Presto Automation, anyị na-enye ọtụtụ nzukọ ọmụmụ ihe dị iche iche. N'iji ígwè ọrụ ọzụzụ nke oge a, ndị ọkachamara anyị jikọọ tiori na omume ụwa. Ndị ahịa anyị na-apụta na ntụkwasị obi na arụmọrụ igwe ha, yana ndị ọrụ nọọrọ onwe ha, ndị lekwasịrị anya.
Rite uru n’ahụmahụ anyị
Hazie otu oge na otu n'ime ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na Presto, ma mụta otu ị ga - esi zute ihe ndị ahịa gị chọrọ ngwa ngwa na ọnụ ahịa dị oke ọnụ. Mụta na ndụmọdụ nke ahaziri maka mkpa gị ka esi arụ ọrụ nke ọma ma mmemme igwe yana ọrụ arụmọrụ, otu esi eme ka ndụ ọrụ nke ngwa gị dịkwuo elu, yana otu, n'ikpeazụ, ịbawanye arụmọrụ nke usoro Presto Automation gị.
MGBE AHRAR I
Presto akpaaka na-enyekwa saịtị (na mpaghara gị) ọzụzụ nke onwe onye ga-egosipụta ihe ndị chọrọ usoro gị, yana njirimara dị mkpa nke akụkụ akụrụngwa ị na-arụpụta. Will ga-enweta nghọta zuru ezu na uru niile nke Presto Automation.
Anyị na-enye Ọrụ & ịgba izu na mpaghara ndị a:
Technology Ngwa igwe na ngwa oru
● Ngwá ọrụ
Systems Usoro nchịkwa na mmemme
● Ọrụ igwe
● Usoro nhazi & imewe
Igwe Presto akpaaka mara maka ntụkwasị obi ha. Otú ọ dị, ọ bụrụ na nsogbu bilie, ndị ọkachamara anyị ruru eru nọ na ọrụ gị. Ndị ọkachamara anyị ga-achọpụta nsogbu ahụ, mepụta azịza ma rụọ ọrụ dị mkpa na sistemụ arụmọrụ Presto ngwa ngwa na nke ọma. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ijide n'aka na mmepụta gị na-aga nke ọma, yana na anyị na-atụ anya atụmanya ndị ahịa anyị.
Mụta ihe banyere anyị Ọrụ Nkwado Ndị Ahịa
Biko nweere onwe gị ịbịakwute anyị ajụjụ ọ bụla ị nwere ike ịkpọ site na ịkpọ +86 180 1884 3376.